Tambajotra fiarovana amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana ho an'ny governemanta | Vahaolana OMG
Tambajotra azo antoka amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana ho an'ny governemanta
Sora-pakan'ny fakan-tsary mihetsika:
Miaina amin'ny vanim-potoana ara-teknolojia fitaovana mandroso, ny fampitaovana farany farany dia nanjary ilain'ny fotoana farany hiantohana ny fiarovana sy ny fiarovana ny fiaraha-monina. Ny fakan-tsary miendrika vatana dia fitaovana kely azon'ny olona ampidirina amina volon-doha na paosy, fa ny sasany kosa manana felaka magnetika. Ny olona iray dia afaka manamboatra azy io amin'ny fiarovan-doha na ao anaty fitaratra. Ny batteran'ity fitaovana maoderina ity dia maharitra mandritra ny ora 6 ka hatramin'ny 8 ary misy raki-peo avo lenta. Afaka mirakitra horonantsary amin'ny alina na amin'ny toerana maizina koa izy io. Tena tsara ho an'ny mpiasan'ny fiarovana izany.
Ny fampiasana fakantsary vita amin'ny vatana ho tambajotra azo antoka ho an'ny Governemanta:
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, dia hita ho miharihary ny fahitana ny fitomboan'ny fampiasana amin'ny Internet. Toy izany koa, amin'izao vanimpotoana izao, misy afaka mampiditra rakitsary horonantsary mora foana amin'ny sehatra maro ary manomboka manomboka mivantana. Amin'izany dia nanjary tambazotra azo antoka ho an'ny Governemanta ny fakantsary fitafy vatana miaraka amin'ireo fanenjehana sy fahaizany. Rehefa miresaka momba ny filaminana sy ny fiarovana isika dia tonga ao an-tsaina ny mpiambina na ny polisy. Ankehitriny dia governemanta maro no nanao fanerena ny polisy sy ny mpiambina hanao fakan-tsary miakanjo. Ity teknolojia farany ity dia ahafahan'izy ireo mirakitra an-tsoratra ireo zava-nitranga nitranga tany amin'ny toerana nitrangan'ny heloka bevava na na nandritra ny resadresaka mahazatra aorian'ny fampitandremana fiarovana. Tena manampy be dia be ny fampitomboana ny fanairana ary koa ny mangarahara hiatrehana ny heloka bevava sy ny fampandrenesana fiarovana.
Na izany aza, ny fakan-tsary tia ny Fitiavana tia vatana dia eo am-piandohan'izy ireo, saingy tsikelikely dia lasa fitaovana faneva eo amin'ny Departemantan'ny Polisy sy ampahany amin'ny akanjo ho an'ny Manambonin'ny polisy manerana ny firenena. Raharaha fika avo lenta no nitondra an'io teknôlôjia io amin'ny toerana misy eo anoloany ary nampitombo ny lazany. Ankehitriny, ny fakan-tsary niakanjo vatana dia lasa fironana vaovao eo amin'ny vondron'olona mpampihatra lalàna. Manatona ny programa mpanamory ny masoivoho ny fampiharana ny lalàna mba hanombanana ny fampiasana azy.
Fandaharana azo antoka ho an'ny governemanta:
Ahoana no ahafahan'ny fakantsary fitaovam-piakanana mitaky tambajotra azo antoka iray an'ny governemanta? Ny fampiasana fakan-tsary mandeha amin'ny vatana dia mampiseho ny fangaraharana sy ny fandraisana andraikitra ataon'ny departemanta pôlisy. Ny fandinihana natao dia naneho fa ny fanatsarana dia tonga tamin'ny fanabeazana matihanina sy ny fihetsiky ny polisy tamin'ny alàlan'ny fampiasana fakan-tsary mifono vatana. Mampitombo ny fanairana ataon'ireo mpitandro filaminana izany. Mahafantatra bebe kokoa ny fihetsik'izy ireo sy ny fifandraisany amin'ny besinimaro izy ireo ary tsy dia miraharaha ny hiampitana ny tsipika eo anelanelan'ny fampiasan-kery ilaina amin'ny fitazonana ireo olona voarohirohy sy ny fanararaotana tafahoatra.
Ny fandinihana natao avy amin'ny loharano samihafa dia naneho fa rehefa mahatsapa ny tenany ny tenany ao ambany fanaraha-maso dia hiova ny fihetsiny. Rehefa mahita ny tenany eo ambanin'ny fanaraha-maso sy ny firaketana fakan-tsary mitazona vatana izy ireo dia lasa mihatsaravelatsihy kokoa ary manova ny fifandraisany amin'ny olona izay mirakitra an-tsoratra. Ny porofo voangona dia mampiseho fa ny olona tsirairay, izay mahalala ny zava-misy fa ny mason'ny fakantsary dia manambina azy ireo, mandray ny fihetsika mahazatra ekena na manaiky izany indrindra fa raha ny mpanara-maso dia sampana mampihatra ny lalàna. Imbetsaka ny asan'ny mpiasan'ny manamboninahitra dia rehefa mifanena ny olona nosamborin'izy ireo sy ny fitondran-tena nasehon'izy ireo teny an-toerana, rehefa samy mivory ao amin'ny efitrano fitsarana ny roa tonta. Ilay voampanga arak'asa manao resaka matihanina izay miresaka mazava dia hafa noho ny patron mamo mamo izay ady natao ary notazonina ho an'ny bateria. Hitan'ny mpikaroka tsara fa rehefa hitan'ny fitsarana ny horonantsary mirakitra ny fiheverana dia tsy mitovy. Mety mahasosotra ny fahatongavany ho any amin'ny fitsarana raha mahita olona voampanga miakanjo manao akanjo ara-dalàna miaraka amin'ny fitondran'ny anjely izay tsy mitovy amin'ny olona nosamborina. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fakan-tsary mba hisamborana ny tena toetran'io olona io sy ny toe-tsainy dia mety hanampy betsaka rehefa mandeha ny fitsarana.
Miaraka amin'ny fanovana fihetsika mety, ny tombony azo avy amin'ny fakan-tsary mifehy ny vatana ho an'ny masoivoho dia mihena ny fitarainan'ny olompirenena ary ny fampiasan'ny manampahefana ny trangan-kery. Ao amin'ny 2012, ny Departemantan'ny Polisy ao amin'ny Rialto, miaraka amin'ny Cambridge University United Kingdom, dia nanao fandalinana herintaona nahitana ny voka-dratsin'ny vokatr'ireo polisy. Nandritra ny herintaona, dia nisy fakan-tsary isan-karazany no nomena tamina fakantsary fa ny hafa kosa tsy. Ny fianarana dia santionany amin'ny fiovana isan-karazany amin'ny fotoana samihafa hianarana. Taorian'ny vanim-potoana herintaona, dia nahatalanjona ny vokatra. Ireo vondrona natokana amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana dia nihena ny lozisialy fampiasa an-keriny 60% nanomboka tamin'ny taona voalohany. Ny fandinihana ihany koa dia nitatitra fa ny fitarainan'ny olom-pirenena momba an'io vondrona io dia nihena ny 88% noho ny fitsarana tamin'ny taona lasa. Ny lehiben'ny polisy Rialto dia nanambara ny fihenan'ny isan'ny fitarainana noho ny manampahefana milamina tsara kokoa na ny olom-pirenena mitondra tsara kokoa, mety ho tsy misy dikany mihitsy.
Nandritra ny fandinihana iray hafa amin'ny fakan-tsary mitazona vatana misy tambajotra azo antoka sy ny fomba mampihena ny fitarainan'ny olom-pirenena, ny Departemantan'ny Polisy Mesa dia nanao fanadihadiana nandritra ny herintaona izay mifantoka indrindra amin'ny fampihenana ny fitarainana. Ny fandaharam-pitantanana dia misy vondrona roa; Mpiambina 50 mpanara-maso miaraka amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana sy 50 tsy misy fakantsary vatana. Samy mitovy ny anjara asan'ireo vondrona roa ireo amin'ny adidy sy ny demografika. Ny fandinihana, natao niaraka tamin'ny University of Arizona, dia namintina fa ireo mpiambina ireo tsy misy fakantsary dia manana fitarainana in-telo bebe kokoa. Ankoatra izany, ny fanadihadiana dia nanome ihany koa ny fehin-kevitra fa ireo manamboninahitra patroli izay manana fakantsary manana vatana dia misy fampihenana 75% amin'ny fampiasana fitarainan-kery ary fampihenana ny 40% amin'ny fitarainan'ny olom-pirenena nanomboka tamin'ny taon-dasa izay nitifiran'ireo fakan-tsary. tsy ampiasaina.
Ireo fanadihadiana roa ireo dia nanaporofo fa ny fakan-tsary niakanjo vatana dia miaro ny tambajotra ho an'ny governemanta satria ny valin'ny manaitra maharesy azy dia mamaritra ny fakantsary raisina ho an'ny vatana no nihena ny fitarainan'ny olom-pirenena. Ity dia tokony hatao amin'ny lafiny roa amin'ny fitondran'ny andaniny sy ny ankilany avy amin'ny fahatsiarovan-tena ny zava-nitranga. Nilaza ny lehiben'ny polisy Greensboro Ken Miller fa mandrisika ny mpiasanay izahay hampahafantatra ny olona fa mirakitra an-tsoratra izy ireo satria mieritreritra isika fa manentana ny fitondran-tena eo amin'ny andaniny roa amin'ny fakantsary.
Ny fandraisam-peo horonantsary avy amin'ireo manampahefana mampiasa fakantsary milentika vatana dia azo ampiasaina koa hanitsiana ireo olana anatiny ao amin'ny sampana. Ary fitaovana fitaovana fampiofanana mahasoa izy io. Tamin'ny fanadihadiana vao haingana avy amin'ny Lehiben'ny polisy manerana ny firenena momba ny fampiasana horonan-tsary fakan-tsary amin'ny vatana, ny 94% amin'ireo mpamaly dia nilaza fa nampiasa azy ireo izy io mba hamerenan'ny mpitantana hanitsy ny fihetsika manamboninahitra na ho fitaovana fiofanana. Ny horonan-tsary fakan-tsary dia manana ohatra betsaka amin'ny fampiofanana. Raha mandinika ny haino aman-jery, ny tompon'andraikitra dia afaka manombatombana ireo politika misy ankehitriny ary manapa-kevitra raha tokony hanao fanovana mifototra amin'ny fihaonan'ny tena mpiasa. Ny departemanta fiofanana dia afaka mamorona toe-javatra voafaritra manokana mba hampiofanana ireo manampahefana mifototra amin'ny fiantsoana tena izy. Ankoatr'izay, ny fampiofanana mpiandraikitra dia mety ho tonga any amin'ny masoivoho tsirairay na departemanta anatiny.
Angamba ny iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny fampiharana ny lalàna dia ny fahazoana an-keriny sy fanaterana porofo ho an'ny famotorana mpanao heloka bevava. Ary indray, fitaovana iray hafa izay afaka manampy amin'ny fitsarana miroborobo ny asan-jiolahy. Rehefa mamaly ny sehatra lehibe indrindra ny tompon'andraikitra, ny ankamaroan'ny zavatra ifantohan'izy ireo dia ny fiantohana ny sehatra ary ny fanampiana ireo traboina amin'ny fepetra fanampiana voalohany. Rehefa nanomboka ny dinidinika izy ireo sy niezaka nitambatra ny zava-nitranga dia sarotra ny mandinika ireo tsipiriany rehetra. Amin'ny alàlan'ny fakan-tsary mandeha amin'ny vatana, ilay tompon'andraikitra dia afaka mirakitra an-tsary ary misy tsipiriany fohy izay mety ho hita. Raha mbola mandehandeha eny amin'ny toerana nitrangan'ny asa ratsy izy ireo dia noraketin'izy ireo toy ny valiny voalohany. Ity fitaovana ity dia afaka manome fampahalalana marobe momba ny manamboninahitra izay tonga tsara alohan'ny zava-misy rehefa mangina ary tsy maika. Ny lehiben'ny polisy ao amin'ny Dalton, Parker dia nilaza fa tsy toy ny fakan-tsary amin'ny fiara, ny fakantsary fiakanjoam-paty no mirakitra ny zava-drehetra mitranga amin'ny fitsidihan'ny manampahefana manodidina ny tontolon'ny asa ratsy ary manadihady olona marobe. Ireo fakantsary vita amin'ny vatana dia tena mahasoa amin'ny famonjena ireo fampahalalana marina.
Ny mpampanoa lalàna eo an-toerana ihany koa dia entanina sy mazoto miasa amin-kery hampiasa an'ity teknolojia ity. Matetika dia sarotra ny miaro ny fananana horonantsary aseho eo amin'ny fitsarana. Any Kentucky, mpisolovava iray eo an-toerana no nisafidy ny fampiasana ny horonantsary fakan-tsary mifono vatana. Mora kokoa ho azy ireo ny mahatakatra ny fiampangana voatonona fa mety ho tombontsoany indrindra, satria tsy tianao ny tontolon'ny mpitsara hahita izany. Marina indrindra izany amin'ireo raharaha herisetra mianjady amin'ny fianakaviana rehefa omena ny fitsarana ny horonantsary. Matetika, indrindra raha toa ka misy ny fivoaran'ny fanararaotana ka atahoran'ny olona ny niharam-boina, tsy te-hanao fanerena izy ireo. Ny porofon'ny fanangonana dia sarotra indrindra. Miaraka amin'ny niharam-boina sy ny fitsapana tsy saika tanteraka. Amin'ny alalàn'ny mpampanoa lalàna ny porofo amin'ny lahatsary rehefa tonga eo an-toerana, dia misarika ny fihetsik'ireo niharam-boina sy ireo olona voarohirohy ary koa ny ratra rehetra notazonina. Manome tranga izany ireo mpampanoa lalàna, ka afaka manangana tranga izy na dia mandà aza ny fiampangana na tsy mety manome fanambarana izy. Ny lehiben'ny Miller of Topeka dia nilaza fa rehefa nasehonay ireo olona voarohirohy tamin'ny raharaha herisetra an-trano dia horonantsary horonantsary avy amin'ireo fakantsary fiakanjoam-paty, matetika izy ireo no nitsoaka trosa nefa tsy voatery niatrika fitsarana.
Raha fintinina dia namaha olana sy ahiahy ny masoivoho mpampihatra lalàna ny fakan-tsary mitazona vatana ary lasa tambajotra azo antoka ho an'ny governemanta.
Tambajotra azo antoka amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana ho an'ny governemanta no farany niova: Oktobra 9th, 2019 by Admin